Obumex - kompas kompas - 60 afọ (35 na ngwaahịa) - Ezi Stuff Factory
Home / Oche / Obumex - kompas kompas - 60 afọ (35 nọ na ngwaahịa)
Obumex - kompas kompas - 60 afọ (35 nọ na ngwaahịa)
Ohere inweta ịchọta oche ndị a ebe pere mpe. N'inwe mbipụta nwere mmachi na njirisi mara mma, ọ bụ ndị fọrọ obere ka ọ bụrụ ndị niile 'hụrụ vinite' chọrọ ya. Dị mara mma, ụkwụ na-acha uhie uhie na oche siri ike na azụ. Odị OBUMEX bụ ụdị mbido nke (Prouvé) oche oche pyramid sitere na 60 afọ. Tupu ị fuo kpamkpam n'ihi ọdịdị mara mma ha, anyị na-ekwu hoo haa na oche ndị a adịlarị 50 afọ. Ha dị oke mma ma enwere ike iji ya ozugbo, mana atụkwala anya na ọhụụ :-).
Ogwe n'oche: 39cm
- € 65 ma ọ bụrụ na azụrụ ya n'otu n'otu
- € 60 sitere na ihe 10
- € 57,5 site na 30 iberibe
- € 52,5 mgbe ị na-azụ tiketi niile
- oche dị elu nke 46 cm
EKWU: site na ọrụ anyị @ € 1 / km ma ọ bụ na pallet site na onye ozi na € 72.5 maka ọnụ ọgụgụ buru ibu. Anyị nwere ike iji DPD ziga oche 2 na € 15 n'otu ngwugwu. Europe na € 15 na € 25 kwa ngwugwu.
Categorieën: Nnukwu tiketi, Oche Tag: obumex